Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inay ka baxay xisbi uu ka mid ahaa. – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inay ka baxay xisbi uu ka mid ahaa.
C/llaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah Xubnaha Golaha Shacabka soomaaliya ayaa shaaciyay inuu ka tanaasulay xubinnimada Xisbiga Midowga Horumarka iyo Nabadda ee loosoo gaabiyo UPD oo uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Qoraal gaaban oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku cadaynayay inuu ka tanaasulay Xubinnimada Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka (UPD) wuxuu Tilmaamay inuu Talbaadaas u qaadya sababa isaga u gaar ah oo uusan doonayn inuu shaaciyo.
Sidoo kale wuxuu u mahad celinayay dhamaan Madaxda, Xubnaha iyo Taageerayaasha Xisbiga uu ka baxay mudadii ay isla soo shaqaynayeen.
Xildhibaanka ayaa xisbiga uu hada sheegay inuu ka tanaasulay xubinimadiisii wuxuu u rajaynayay Mustaqbal Wanaagsan iyo Horumar Wacan.
Xisbiga Midowga Horumarka iyo Nabadda ee UPD ayaa dhowaan lagu sameeyay gudaha magaalada muqdisho ee Caasimada dalka Soomaaliya waxaana ku midoobay xisbiyo kala duwan iyo Xildhibaanno ka tirsan golaha shacabkla ee baarlamaanka soomaaliya.
Xildhibaan C/llaahi Maxamed Nuur ayaa ahaa Xoghayihii Guddiga Maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya qoraal uu maalmo ka hor soo dhigay bogiisa facebookiisa ayuu ku sheegay inuu iska casilay xubinimada guddiga maaliyadda ee golaha shacabka.
kaddib markii wareegto uu soo saaray Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal sheikh cabdiraxmaan uu kaga saaray Guddiga isaga iyo labada xildhibaan oo kala ahaa cali cabdi cismaan iyo Maxamed aadan macalim.
Intaasi ka hor sidoo kale waxaa uu ka mid ahaa Xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeday Xukuumaddam Soomaaliya ee hada talada haysa, wuxuuna hoggaaminayay Warbixintii Guddigii Maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya ee la xiriirtay musuq maasuq oo lagu sheegay inay maqan tahay lacag dhan 42 Milyan oo Doolar dhaqaalaha dalka Soomaaliya,wallow dhamaan eedaymahaas ayw axba kama jiraan iyo kuwa dano gaar ah laga leeyahay ku Tilamaamtay wasaarada maaliyada Soomaaliya.
← Xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo aas qaran loo sameeyay.
DHAGEYSO:Madaxweyne Gaas oo safar aan horay loo shaacin ku tagay magaalada Gaalkacyo. →